अन्तर्वार्ता Archives - Ahakhabar
मन्त्री खनालद्वारा मायादेवी गाउँपालिकामा गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण
कपिलवस्तु, २९ असार । कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु गरिएको छ । कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री चक्रपाणि खनालले शुक्रबार मायादेवी गाउँपालिका–८ का घरपरिवारलाई गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण गरेर अभियानको सुरुआत गरेका हुन् । विनोद भट्टराईले इमेज खबरमा लेखेका छन् । कपि...
टोल–टोलमा ‘प्रहरी अभियान’ का लागि शनिबार र्‍याली निकालिन्दै
काठमाडौं, २९ असार । गृह प्रशासन सुधारको उद्देश्यले भोलि (शनिबार) काठमाडौंमा सचेतना र्‍याली निकालिने भएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरले टोल–टोलमा ‘प्रहरी अभियान’ कार्ययोजना लागू गर्नका लागि शनिबार विहान साढे ७ बजे र्‍याली आयोजना हुने भएको हो । मिनभवनबाट शुरु हुने र्‍याली तीनकुने परिक्रम ...
नुवाकोट, २९ असार । त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रमा मंगलबार अपराह्न लागेको आगोले पुर्‍याएको क्षतिको मर्मत गर्न अझै एक साता लाग्ने भएको छ । जलविद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत्लाई टान्सफर्मरसम्म पुर्‍याउन प्रयोग गरिएको विद्युतीय तारमा जडान गरिएको ‘बसबार’ र तीनओटा ‘ब्रेकर’मा आगोले क्षति पुर्‍याएपछि २१ मे...
रियल समर्थकको रोजाईमा रोनाल्डोको विकल्प को -को परे ? (थाहा पाउनुहोस्)
म्याड्रिड, २९ असार । क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल म्याड्रिडका समर्थक माझ रुचाइएका खेलाडी थिए । नयाँ सिजनको सुरुवात अघि युभेन्ट्समा उनको सरुवाले कतिपय समर्थक निराश भएका छन् । पोर्चुगलका सुपर स्टार रोनाल्डोले आफुलाई क्लबको महान खेलाडीमा उभ्याएका छन् । रियललाई घरेलु वा युरोपमा उपाधि दिलाउने क्रममा रोनाल्डोले सधै त्यसको नेतृ...
पच्चीस लाखको लागतमा जिल्लाकै ठुलो कभर्ड हल निर्माण हुदैँ
रामपुर, पाल्पा, २९ असार । रामपुर क्षेत्रमा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो कभर्ड हल निर्माण गर्न लागिएको छ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को कूल रु २५ लाखको लागतमा निर्माण हुन लागेको कभर्ड हल १८ मिटर चौंडाई र ३० मिटर लम्बाइको छ । हल निर्माणबाट ब्याटमिण्टन, भलिबल, तेक्वान्डो, कराँते लगायतका विभिन्न खेल सञ्चालनमा सहज हुनेछ । उक्त न...
सावधान !! के तपाईको नङ टोक्ने बानि छ ? यस्तो खतरा रोग लाग्न सक्छ !
मानिसको प्राय सबैको एउटा एउटा अधत हुन्छ । कतिपय मानिसको नङ टोक्ने बानी हुन्छ । बालबालिकामा यस्तो बानी देखिनु सामान्य हो । तर, युवायुवती या पाका उमेरका मानिस नै नङ टोकीरहेका हुन्छन् । नङ टोक्ने बानी खराब हो । त्यसैले अभिभावकहरुले बालबालिकालाई नङ टोक्नु हुँदैन भनेर सिकाउनुपर्छ । नङ टोक्ने बानीले विभिन्न प्रकारका संक्रमण ...